जापानमा मैले जे भोगेँ « नारी खबर >
जापानमा मैले जे भोगेँ
आश्विन २, २०७३ आईतबार
त्यसताका भर्खर-भर्खर जापान आइपुगेकी म भाषाको कमजोरीले काम पाउन गाह्रो थियो । न त यहाँ अङ्ग्रेजी चल्थ्यो । भाषा नजानी विकल्प थिएन । कामको खोजीमा हेल्लो वर्क पुगेँ । एउटा रेष्टुरेन्टमा इन्टरभ्यूको लागि पठाइयो ।
भाग्यले साथ दियो । जनवरी २० तारेख बेलुका ५ बजेबाट मेरो काम थियो । पहिलो दिन ३० मिनेट अगाडि आइपुग्नुपर्ने चिफको आदेश थियो । नेपालबाट भर्खर आएकीले समयसँग हिड्न मलाई धौ-धौ पर्थ्यो । सेकेन्डको महत्व त्यतिबेला बुझेकी थिएँ, जतिबेला सेकेन्डले ट्रेन छुटेर काम फुत्केको थियो ।
सेतो सट, कालो पाइन्ट, बाहिर एप्रोन बाँधेको मान्छे काउन्टरनेर थियो । आजबाट काम छ भनेपछि उसले लिडरलाई बोलायो । ड्रेस चेन्ज गरेपछि सबैसँग परिचय गराउने क्रम थियो ।
किचनको बाहिरपट्टी उही सेतो सट, कालो पाइन्ट बाहिर एप्रोन लगाएर हतार-हतार भाँडा मस्काउँदै मेसिनमा हाल्दै गरेको मानिसमा आँखा पुग्यो । ऊ कहिले ड्रिङ्स बनाउन आइपुग्थ्यो । हलका अरु ड्रिङ्स आेसार्दै थिए । लिडरले मलाई अभिवादनसहित हात धुन सिकाउँदै थिए ।
भाँडा मस्काउँदै गरेको मानिस म नजिक आयो । लिडरले परिचय गरायो । ऊ म्यानेजर रे । म झस्किएँ !!
न त उसको घुमाउने कुर्ची थियो त्यहाँ न त अरुमाथि आदेश । न त काम ठूलो सानो थियो न त मैले सोचेजस्तो म्यानेजर थियो ऊ ।
हजुरआमासँग टपरी गाँस्न अघि सर्दा ‘पढ्नुपर्छ, अहिलेको जमानामा नपढेकाले पियनको जागिर नि पाइन्न’ भनेर हप्काउनु हुन्थ्यो ।
‘पियन भनेको कस्तो हो ?’ मेरो उत्सुकतामा ‘अरुको जुठो भाँडा माझ्ने, ट्वाइलेट सफा गर्ने’ हजुरआमाको उत्तर थियो ।
कामलाई नै सर्वस्रेष्ठ मान्ने यहाँ फरक देश, फरक भाषाका मानिसलाई नि कत्ति मज्जाले काम सिकाउँछन् । कामलाई ठूलो सानो मानिँदैन । जतिबेला पनि व्यस्त देखिन्छन् । यिनीहरुको जीवन के दिन के रात ! सुत्ने समय कम हुन्छ ।
व्यस्त जीवनका कारण ट्रेनमा यात्रामा सुतेको देखिन्छ । यिनै नागरिकको अनुशसासन, लगनशीलता र मेहनतले विकासको द्रुत गतिमा पुगेको देश हो जापान । यिनीहरुबाट हामीले नि केहि सिक्नुपर्छ की ?